Global Voices teny Malagasy » Fantaro i Mama A. Nii Owo, mpitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron’ny 1-7 mey · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Mey 2019 9:30 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika Andriamifidisoa Zo
Sary nomen'i Mama A. Nii Owo.
Mandritra ny taona 2019 ary ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-piteny antserasera , hifandimby ny Afrikana mpikatroka ara-piteny sy ireo mpanandra-teny amin'ny fitantanana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang  hizara ny zava-niainan'izy ireo amin'ny famelomana indray sy amin'ny fampiroboroboana ny fiteny afrikana. Hiresaka momba an'i Mama A. Nii Owo (@AdobeaO ) sy izay kasainy horesahana mandritra ity herinandro ity ny lahatsoratra.
Mama A. Nii Owoo no anarako. Manoratra amin'ny solon'anarana Naa Oyoo Owoo izay anarana ara-poko sy ara-drazako ihany koa aho. Gã no fitenim-poko misy ahy. Fitenin-teratany avy ao Accra, Ghana ny Gã. Ankoatra ny GãDangme, miteny amin'ny fiteny maromaro ihany koa aho: Akan (fiteny Ghaneana), anglisy, espaniola ary frantsay.
Liana aho amin'ny karazana sehatra (mandrotsaka-mametraka) azon'ny mpanabe sokafana na akatona mba hampahomby ny fiteny tompontany. Tia mampianatra aho ary efa niasa niaraka tamin'ny mpianatra avy amin'ny sokajin-taona rehetra tao Ghana, Kiobà, Etazonia, Espaina ary Canada. Efa niasa ho mpandikanteny koa aho tany Espaina tao amin'ny Foibe Iraisampirenena Universidad de Sevilla ao Espaina. Amin'izao fotoana izao aho mianatra mba hahazoana Ph.D amin'ny Fanabeazana Fiteny sy ara-literatiora ao amin'ny Ivontoerana Ontario misahana ny Fanadihadiana ao amin'ny Fanabeazana.
Mifototra amin'ny politikam-piteny sy ireo iainan'ny mpampianatra fiteny mampafantatra ny fomba ametrahana-androtsahana ny tenin-drazana miankina amin'ny politikam-panabeazana am-piteny roa ho an'ny mpianatra ny fikarohako
Mizotra mankany amin'ny lalan'ny fahavelomana indray sy ny hahamaoderina azy ny Gã, tenindrazako. Ankoatra ireo fandaharana amin'ny fahitalavitra sy ny onjampeo ao Ghana, dia eo ampanorenana fanairana amin'ny fikajiana ny fiteny amin'ny alalan'ny akanin'ny fiteny virtoaly ao amin'ny sehatra media sosialy tahaka ny Facebook, Twitter, tranonkalam-bilaogy, tranonkala sns ireo taranaka tanora sy lehibe mpiteny Gã.
Raha mijery ny kolontsaim-bahoaka, eo ampananganana fitaovana toy ny zipo sy kilaotin-kira (takon-kenatra sa sivilizasiona?) sy tantara tsangana amin'ny fiteny Gã izay azo ampiasaina amin'ny tontolom-panabeazana ny artista. Azonao atao ihany koa ny mahita fitaovana toy ny literatioram-pivavahana, baiboly, rakibolana sy haren-tantara amin'ny nahatongavan'ny Gadangme ho tonga amin'izao anio izao, taorian'ny andiam-pifindramonina maromaro izay mifandraika amin'ny fifindramonina lehibe (eksodosy) ara-bibilika avy any Ejipta.
Hifantoka amin'ny fomba fahazoana sy ny fisian'ny fitaovana ara-panabeazana hianarana fiteny ghaneana tompontany antserasera aho. Hifantoka bebe kokoa amin'ny Gã izay tenindrazako aho.
I founded the Afroliteracies Foundation (AF), @afroliteracies , a think tank and action-research based network for revitalizing indigenous African languages in education based in Ghana. The Afroliteracies Foundation brings together teachers and community language experts to develop culturally relevant bilingual teaching and lesson materials for free use in Ghana and other contexts.
Nizatra ho mpampianatra teny espaniola aho ary tiako ny asako. Saingy nifantoka bebe kokoa amin'ny famelomana indray ny fiteny tompontany aho satria tsapako fa miteraka krizy lehibe amin'ny fahaizan'ny ankizy ao Ghana mamaky teny sy manoratra ny fahabangan'ny fitaovam-pianarana amin'ny fiteny tompontany. Iankinan'ny ain-dehibe tokoa ny fahaizana tsara ny tenin-drazanao amin'ny fivelarana ara-panabeazana sy hahatakarana ny fiteny sy ny kolontsaina hafa.
Ankoatra izany, nianatra fiteny tsy nilain'ny vondrom-piarahamonina misy ahy aho. Misy ny filàna ho an'ny Afrikana hamolavola ny fanabeazana mba hamahana ny olana atrehin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny resaka fivoarana. Ny fanabeazana amin'ny fitenin-drazana no vatofototry ny fivelarana fahaizan-taratasy ary iainkinan'ny aina amin'ny fampivoarana fahaizana akademika amin'ny teny anglisy. Indrisy anefa fa natao tsinontsinona izany asa izany eo amin'ny fampianarana afrikana.
Natsangako ny Afroliteracies Foundation (AF), @afroliteracies , vondrom-pandinika sy mikaroka-miasa amin'ny famelomana imaso indray ny fiteny tompontany afrikana eto Ghana. Avondron'ny Orina Mpanasoa Afroliteracies ny mpampianatra sy ny manampahaizana manokana amin'ny fitenim-bondrom-piarhaamonina hampivelatra fitaovana ilaina amin'ny lesona sy fampianarana am-piteny roa manan-danja ara-kolontsaina mba ho ampiasaina maimaimpoana ao Ghana sy amin'ny toe-javatra hafa.
Iray amin'ny nofiko tsy voafehy indrindra ny mahita ny Gã ho fiteny tsy mena-mitaha amin'ny teny anglisy eo amin'ny sehatra ara-pahaizana sy eo amin'ny sata ara-tsosialy sy toekarena izay isitrahan'ny (teny) anglisy. Saingy endriny amin'ny voafetra ihany io satria mirona kokoa aho mijery ny (teny) anglisy ho miady amin'ny fimaroana ara-piteny izay narandrana amin'ny kolontsain'olombelona noforonina. Ka manantena aho fa ny fampakarana ny Gã ho eo an-tampon'ny tenim-pahalalàna izay mamaly tsara eo noho eo sy lovainjafy ny filàn'ny fiarahamonina no ahafahana mametraka fironana hampahalalàna bebe kokoa ireo fiteny tompontany afrikana (tavela) eo amin'ny tontolom-pivoarana ara-panabeazana sy ara-teknolojia, fikarohana siantifika, famokarana literatiora sy artistika, sns.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/02/138138/